Stacy • Umzimba Wokugcotshwa kanye ne-NuRu Massage
** Chofoza imicibisholo yesithombe esiphezulu ukuthola okuningi kimi **
Siyakwamukela Abahambi Bezivakashi Nezivakashi ~
(Outcall kuphela Amahhotela & Khetha Amakhaya)Sawubona nginguStacy, ngiyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ufunde isikhangiso sami. Lesi isimemo esikhethekile sabanumzane abakhulile abakhulile.
Ngingubuhle bonke bemvelo base-Italiya baseMelika kanye neScorpio esivuthayo esivuthayo. Ilungiswe kahle ingenawo ama-tatoo futhi ungabhemi. Onke ama-32DDD wemvelo, ama-5 '2 ″ ubude, ama-128lbs ne-curvy. Ngiyawuthanda umlando, ukufunda, ukuhamba, nengilazi enhle yeChampagne. Nginikeza ukusikhipha okumangazayo okuvusa inkanuko ngezixaka eziningi ezivusa inkanuko.
Ngifika ngokushesha nangokuqonda ezinduduzweni zakho ngizishayele. Ngiyabathanda abahambi bezebhizinisi nezivakashi futhi ngibenza babe phambili.
Ngibheka wonke amaklayenti ami njengabantu abangaba abangane futhi okuqala njengokuhlangana okungajwayelekile kungakhula kube ubungane beqiniso. Ngikholwa ukuthi inani eliphansi nekhwalithi ephezulu kuyisihluthulelo.
Vumela ukubhucungwa kwami ​​okuhehayo kube wukubaleka kwakho esimisweni sakho esimatasa somsebenzi futhi unikeze ukuthula. Iyatholakala ngo-10AM kuze kube ngu-1130PM ngemizuzu engama-30 kuye kwengama-35
Umzimba othambile, ovusa inkanuko, nobumnandi onakekela wena.
$ 200 / HR SF / SFO Airport / Emeryville /
Izindawo ze-East Bay (Ukukhala kuphela)
~ Ayikho imibhalo noma #s Sicela uvinjelwe ~ Ukuqokwa Kosuku Olufanayo (415) 730-2701
I-San Francisco, CA, eU.SA